Omume a na -adịghị anabata: France na -echeta ndị nnọchi anya ya na US na Australia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na France » Omume a na -adịghị anabata: France na -echeta ndị nnọchi anya ya na US na Australia
Akụkọ na -agbasa Australia • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa • Akwụkwọ akụkọ USA
Ịhapụ ọrụ ụgbọ okpuru mmiri nke Canberra na Paris kwenyere na 2016 bụ 'omume na-adịghị anakwere n'etiti ndị mmekọ na ndị mmekọ, nsonaazụ ya na-emetụta echiche nke anyị nwere na njikọta anyị, mmekọrịta anyị na mkpa Indo-Pacific maka Europe. , 'Minista mba ofesi France kwupụtara.
Gọọmentị France wepụrụ ndị nnọchi anya ya na United States na Australia.
France kpọrọ mwepu ya na njikọ aka AUKUS ọhụrụ na mfu nke nkwekọrịta ụgbọ okpuru mmiri okpuru mmiri bụ nkwudo n'azụ.
Onye isi ala France kagburu ihe omume gala na Embassy French dị na Washington, DC maka ememme ncheta afọ 240 nke agha ụgbọ mmiri mere eme.
Minista mba ofesi France Jean-Yves Le Drian kwupụtara taa na France akpọghachitela ndị nnọchi anya ya sitere na United States na Australia maka 'omume a na-adịghị anabata' nke Washington, London na Canberra n'ịmepụta nkwekọrịta okpuru mmiri nuklia nke butere nsị nke nnukwu ihe ndị France. nkwekọrịta ụgbọ mmiri na Australia.
Dị ka Le Drian si kwuo, mkpebi icheta ndị nnọchianya ahụ ziri ezi site na 'ike ndọda' nke ọkwa Septemba 15 nke Australia mere, USA na UK.
Le Drian kwuru, "Site na arịrịọ Onye isi ala, ekpebiri m icheta ozugbo na Paris maka ịkpọtụrụ ndị nnọchi anya anyị abụọ na United States na Australia."
Onye isi ala US Joe Biden, Prime Minista Australia Scott Morrison na onye nnọchi anya Britain ya Boris Johnson kwupụtara atụmatụ 'AUKUS' na mmemme mebere ụzọ atọ n'ehihie Wenezde. Isi ihe dị na njikọ ọhụrụ a nke “ochichi onye kwuo uche nke mmiri” bụ ọrụ ọnwa iri na asatọ iji nye ụgbọ mmiri okpuru mmiri nuklia nke nwere ngwa agha nuklia mana nke nwere ngwa agha. Nke a ga -eme Australia ka ọ bụrụ naanị mba nke asaa na -arụ ụgbọ dị otu a - na naanị nke na -enweghị ngwa agha nuklia nke ya.
Ọchịchị nke France A kọrọ na achọpụtara banyere nkwekọrịta ahụ site na akụkọ mgbasa ozi mgbasa ozi, kama site na Washington ma ọ bụ Canberra ozugbo, n'agbanyeghị na ndị isi Australia na-ekwusi ike na ha emeela ka "doo anya nke ọma" maka onye mmekọ ha na enwere ike ịkagbu nkwekọrịta French na Australia.
Le Drian na Minista ndị agha Florence Parly wepụtara nkwupụta iwe na nzaghachi nke mkpughe nke AUKUS, onye ozi ala ọzọ mechara kpọọ ya 'mgbọ n'azụ.'
Onye isi ala France Emmanuel Macron kagburu mmemme mmemme n'ụlọ ọrụ nnọchi anya France na Washington, nke akwadoro maka afọ 240 nke agha ụgbọ mmiri nke nyere aka merie agha nnwere onwe US.
Ọ bụghị naanị na France ka ewepụrụ na njikọ aka ọhụrụ ahụ, mana ọ tụfuru nkwekọrịta ịnye Australia ụgbọ mmiri okpuru mmiri. Gọọmentị France nwere oke aka na Naval Group, nke rụrụ ọrụ na nkwekọrịta ahụ, ruru ihe ruru ijeri dọla 66.